Sawirka aadanaha Brett Walker | Abuurista khadka tooska ah
Waxaan ku raacaynaa sawir qaadista iyo aragtida xoogga leh ee sawir qaadaha, Brett Walker. Khabiir sawir qaade ah oo ku saabsan sawirka nooc kasta oo dad ah si uu uga helo muuqaalkiisa taas oo soo jiidata dareenka daawadayaasha ee arka sawirradan taxanaha ah ee qaar ka mid ah u reebi doonaan neefsasho la'aan.
Walker sidoo kale ku ciyaar fotomanipulation-ka si loo helo muuqaalka sawirka si aad usii fogaato una dhawaato indho indheynta daawanaya sawirradan madow iyo caddaan si taxaddar leh. Muuqaaladda qaar oo aan cidna uga tagaynin danayn iyo in lagu baaro dadnimada dadka maalmahan leh fiiro cabsi leh.
Indho sanado ay socdaan muuqaalada ka tarjumaya dhaldhalaalka iyo laalaabku taas oo calaamadeynaysa sannadahaas aan weli iman doonin in lagu soo dhex dago. Sawir bini'aadam ah oo naga qaadaya ka hor sawir qaadaha Britishka ah ee leh qaab gaar ah oo lagu sawirayo nolosha dadka.
Una taxane sawiro madow iyo cadaan ah Kuwaas oo iyagu iyagu ah dhul aad u wanaagsan oo bini-aadamnimo ah isla markaana maalmahan ka baxsan iftiinka iyo kuwa iskaa wax u qabso oo noo sawiraya hab ku dhowaad bucol ahaan ah markii aragtiyo kale oo qoto dheer laga helo innaga. Walker wuxuu eegaa halkan, midkasta gudaheeda, booskaas qarsoon ee inta badan lagu muujiyo aragtidaas iyo in nolosha horteeda la joogo.
Walker ayaa yidhi: «dadka ku jira sawirradayda guud ahaan waxay ka timaadaa xaafadayda London, Ladbroke Grove, waxaan kaliya ka codsaneynaa inay muujiyaan, hadii taasi shaqeyn weysayna waan laaluushaynaa, waa waxa kaliya ee ka shaqeeya wixii ka baxsan hanjabaadaha rabshadaha«.
Kahor sawirradan la shaqeeyay Vogue, The Face ama Yamamoto. Haatan wuxuu isu arkaa sida yeey dhaanto ah oo la yaso warshadaha dharka.
Waxaad leedahay tiisii Flickr iyo iyada Facebook inaad raacdo shaqo fiican.
Dhinaca ka soo horjeedka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fanaaniin » Sawirada cajiibka ah ee Brett Walker
Erayada ayaa loo beddelay astaamo si loo xoojiyo macnahooda